Tenisy: tompondakan’i Afrika Aostraly i Toky sy i Randy | NewsMada
Tenisy: tompondakan’i Afrika Aostraly i Toky sy i Randy
Tontosa, omaly, ny lalao famarana “Individuel” niadiana ny amboaran’i Afrika Aostraly, taranja tenisy, notontosaina tany Namibia. Nanao pao-droa, teo amin’ny sokajy olon-tokana, tamin’ny alalan’i Toky sy i Randy, ny Malagasy.
Voatazona ny teny nomen’ireo solontena malagasy, ny hitondra medaly volamena mody satria azon’ny Malagasy ny amboara teo amin’ny sokajy olon-tokana U14 vehivavy sy U16 lehilahy. Nibata ny fandresena Rakotoarilala Randy, nandritra ny lalao famaranana, Malagasy samy Malagasy izay nifandonany tamin-dRasendra Miotisoa. Lavon’i Randy tamin’ny isa mavesatra seta, 2 no ho 0 (6/4 6/1), i Miotisoa nandritra izany. Teo amin’ny lehilahy kosa indray, tafavoaka nanoloana an’i Roothman ny mpifaninana malagasy Ranaivo Toky, tamin’ny alalan’ny seta 2 no ho 1 (6/1 2/6 10/7). Tompondakan’i Afrika Aostraly, taranja tenisy, araka izany, Rakotoarilala Randy sy Ranaivo Toky, taorian’ity lalao famaranana, omaly, ity.
Tetsy ankilany, tsy nahahovoka firy ny mpifaninana malagasy, sokajy olon-droa satria iray ny fandresena azon’ny Malagasy tamin’ireo lalao telo notontosaina. Nibata ny fandresena nanoloana an’i Magarina sy i Arends ny mpifaninana Malagasy, i Mialy sy i Narindra, sokajy U16 vehivavy, tamin’ny alalan’ny seta 2 no ho 0 (7/5 6/4). Tsy afa-bela nanoloana ny mpifanandrina taminy kosa ny sokajy U14 lahy sy vavy. Niondrika teo anatrehan’i Faure sy i Botha i Maholy sy ny namany (2/6 1/6). Lavo, toraka izany, koa i Mahefa sy i Finoana nanoloana an’i Matthysen sy i Bazda (4/3 4/6).
Marihina fa ny lalao teo amin’ny sokajy “individuel” no nifarana omaly fa hanomboka anio ary hifarana ny 15 janoary kosa ny lalao isam-bondrona, na ny “par équipes”.